HomeWararka SomaliyaMaxkamada ICJ oo war ka soo saartay Muran badeedka Soomaaliya iyo kenya
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee The HAGUE ayaa war qoraal ah oo ay ka soo saartay kiiska muranka dhanka badda ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ku sheegtay in dhagaysiga kiiskaasi uu furmayo maalinta Isniinta ah ee 15 bishaan Maarso marka saacaddu ay tahay 3 p.m.
Horay ayaa maxkamaddu u sheegtay in dhagaysiga kiiskaasi uu dhacayo taariikhda kor ku xusan, kaddib markii dhowr jeer oo hore dib loo dhigay.
Fadhiga Dacwadda oo ka qabsoomaya Hoolka The Peace Palace ee Hague saacadu markay tahay 3:00 Galabnimo, ayaa waxaa ka qayb galaya xubno ka tirsan Garsoorayaasha Maxkamadda, halka inta kalana ay Video uga qayb galayaan.
Diblomaasiyiinta, Wariyayaasha iyo Dadwaynaha waxay dhagaysiga Maxkamadda kala socon karaan Bogga Qaramadda Midoobay.
Faah faahin Weriye Lagu dilay Galkacyo